Hevitra handravaka rehefa avy nesorina ny ravaka Krismasy | Asa tanana
Hevitra handravaka rehefa avy nesorina ny Krismasy ravaka
Jenny monge | | Decor, Asa tanana an-trano
Salama daholo! Ao amin'ny lahatsoratra anio dia hahita hevitra dimy momba ny handravaka rehefa avy nanala ny Krismasy ravaka. Amin'ny fiafaran'ny Krismasy sy ny fanesorana ireo haingo mahazatra amin'ireo tapa-kazo ireo, dia mety ho tsapantsika fa tavela ho foana ny talantalana na ny latabatray, ka manome hevitra anao izahay hanavao ny haingon-tranonay.
Te hahafantatra ireo hevitra ireo ve ianao?
1 Hevitra fanaingoana laharana 1: silaka voasary maina handravahana.
2 Hevitra fanaingoana laharana 2: fitaratra macrame
3 Hevitra haingoana laharana faha-3: fitoeran-jiro misy akorandriaka pistachio
4 Hevitra haingo laharana faha-4: Garland Pom Pom
5 Hevitra handravaka ny laharana faha-5: Hosodoko boho rustic tsotra
Hevitra fanaingoana laharana 1: silaka voasary maina handravahana.
Amin'izao vanim-potoanan'ny voasary izao, dia safidy tsara ny hanamainana an'io voankazo io mba hampiasaina amin'ny haingo. Afaka manamboatra siny misy voankazo feno, labozia, lovia ...
Azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy izay avelanay eto ambany: Manama ny silaka volomboasary hanaovana haingon-trano
Hevitra fanaingoana laharana 2: fitaratra macrame
Mety misy fitaratra antitra ao an-trano, azo havaozina sy ahantona amin'ny rindrina mba hanana haingon-trano tsara tarehy toa ity.
Azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy izay avelanay eto ambany: Fitaratra Macrame
Hevitra haingoana laharana faha-3: fitoeran-jiro misy akorandriaka pistachio
Miaraka amin'io hevitra io, ankoatra ny haingo amin'ny fomba tsara tarehy sy tany am-boalohany, dia hanodina ny akoran'ity voankazo maina manankarena ity isika.
Azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy izay avelanay eto ambany: Tompon'ny labozia misy akorandriaka pistachio
Hevitra haingo laharana faha-4: Garland Pom Pom
Azo inoana fa rehefa avy nesorina ny ivon'ny Krismasy dia manontany tena isika hoe inona no azontsika apetraka ankehitriny haingo. Noho izany, ity hevitra miaraka amin'ny pompoms sy jiro ity dia mety ho vahaolana.
Azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy izay avelanay eto ambany: Garlanda Pompom
Hevitra handravaka ny laharana faha-5: Hosodoko boho rustic tsotra
Ity sary hosodoko ity dia mety tsara sady miankin-doha amin'ny talantalana na mihantona amin'ny rindrina. Azonao atao ny manamboatra endrika geometrika izay tianao indrindra.
Azonao atao ny mahita ny fomba hanaovana an'ity asa tanana ity amin'ny alàlan'ny fanarahana ny rohy izay avelanay eto ambany: Sary hosodoko boho mora haingo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa tanana an-trano » Hevitra handravaka rehefa avy nesorina ny Krismasy ravaka
Asa tanana handravaka bosoa
Lolo mahatsikaiky vita amin'ny baoritra sy baoritra